Ankavandra : Halatra omby, dahalo telo matin’ny zandary
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2014 → avril → 18 → Ankavandra : Halatra omby, dahalo telo matin’ny zandary
Redaction Midi Madagasikara 18 avril 2014 Andabomadinika, Androtsy, Ankavandra, basy, Bongolava, Dahalo, Miandrivazo, omby, Tsiroanomandidy, zandary
Tsy mety mijanona ny halatra omby ataon’ny dahalo any amin’ny disitirikan’Ankavandra sy any Miandrivazo. Vosokajy ho faritra mena ireo toerana ireo raha ny asan-dahalo no tenenina. Tsy mikely soroka miady amin’izany ny Zandary any an-toerana, indrindra hatramin’ny nametrahana “Officier coordinateur”, ka misy ny vokatra azo.
Ny 11 avril 2014 dia malaso 12 lahy mirongo barim-borona no nanafika ny tanànan’ Androtsy , kaominina Soaloka, distrikan’i Miandrivazo. Niatsinanana nihazo an’i Bongolava ny dian’omby. Nanara-dia ny Zandary avy ao amin’ny “Poste Avancé Soaloka” sy ny fokonolona ka nisy ny fifandonana, ny tolak’andron’ny 14 avril 2014, nandritra ny ora iray teo ho eo, tao amin’ny alan’ i Morafeno, Ambaravaranala, kaominina Fiarenana, any Tsiroanomandidy. Dahalo 02 no maty ary tafaverina amin’ny tompony avokoa ny omby rehetra, nisy ny basy azo.
Ny 12 avril indray dia halatra omby roa samihafa no niseho. Ny iray tao Andabomadinika, ka dahalo 16 mirongo basy no nandroba omby miisa 60. Ny faharoa kosa tao Antsakoabe, Betsipolitra, samy kaominina Soaloka, dahalo 08 mitondra basim-borona ihany koa no nangalatra omby miisa 50. Nitambatra ireo dian’omby roa ireo nandalo ny kizon’Ambilorano, any Ankavandra, nefa efa tsara toerana mialoha tao ireo zandary mpiandry kizo. Raikitra ny fifampitifirana ka dahalo 01 maty ary vaky nandositra kosa ny sisa. Azo ny omby ankoatra ireo novonoin’ny dahalo sy ny nisara-dalana tamin’ny namany.
Marihina fa tsy nisy naratra na namoy ny ainy tamin’ireo mpitandro filaminana sy ny fokonolona nanara-dia.